Botnets वा Ransomware। तपाईंको कम्प्युटरको लागि ठूलो बुबा के हो? - सिमुल सोध्नुहोस्
आजकल, ransomware एक महान इन्टरनेट सुरक्षा खतराहरु मध्ये एक छ। हालै, वानाक्राइटरले आक्रमण गरेको 350,000 कम्प्यूटरले विभिन्न इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र सुरक्षा एजेन्सीबाट लाखौं दृश्यहरूलाई आकर्षित गर्यो। यो लगभग हामी आजको सामना गर्दै सबैभन्दा ठूलो खतरा जस्तो देखिन्छ। तथापि, आजका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू अधिक खतरनाक उपाध्यक्षको सामना गर्दै छन्, र यो बूटुनहरू छन्!
जबकि ransomware आक्रमण साँच्चै पीडा हो, तिनीहरू कम से कम देखिने देखिन्छन्। बोटनेटहरूले लुकेको तरिकामा उनीहरूको विनाशकारी प्रभावहरू हटाउँछन्। यो मालवेयरले नेटवर्कमा लाखौँ कम्प्यूटर र अन्य यन्त्रहरूमा पूर्ण नियन्त्रण लिन सक्छ।
फ्रैंक निदान, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धकले बताउँछ कि एफबीआईले अनुमान गरेको छ कि हरेक वर्ष 500 मिलियन कम्प्युटरहरू संक्रमित छन्। एक संक्रमित मिसिन अन्य सुरक्षा धम्कीहरु को एक पूरी श्रृंखला को सामने छ। उदाहरणको लागि, यो ransomware द्वारा इन्क्रिप्ट गरिएको हुन सक्छ र अर्को प्रकारको मालवेयर वितरित गर्न एक उपयुक्त उपकरण बन्न सक्छ। साइबरक्राइमले सजिलै बोटनेटलाई स्प्याम वितरण गर्न निर्देशन दिन्छ, र सफलता दर लगभग 100% हुनेछ। यो सबै हुन्छ जब कम्प्यूटर मालिकहरू के के गरिरहेको छ भन्ने बारे थाहा छैन। केही विशेषज्ञहरूले तर्क दिएका छन् कि बोटनेटहरू इन्टरनेटलाई सम्मिश्रण गर्ने क्षमता छ।
किन botnets तपाईं ransomware भन्दा बढी चिन्ता गर्नुपर्छ (1 9)
धेरै बोनसहरू छन् किनकि ब्वाटेननेटहरूले रानोमवेयर भन्दा ठूलो खतरा बढाउँछन्। साथै, अदृश्य हुन, बूटनेटहरूको प्रभाव व्यापक छन्। उनीहरूले संक्रमित कम्प्युटर प्रयोग गर्न अन्य कम्प्यूटरमा स्पाम र अन्य ransomware पठाउन वा सेवाको इन्कारियल (DOS) आक्रमणहरू गर्न सक्छन्। तिनीहरू पनि नेटवर्क धोखा गर्न पनि प्रयोग गर्न सक्थे। सबैलाई यो खतराबारे चिन्तित हुनुपर्दछ, दिमागमा 50- 70 प्रतिशत ईमेल ट्राफिक रूपमा प्राय: स्प्याम गरिएको छ। दुर्भावनापूर्ण संलग्नकहरूको साथ सबै इमेलहरू बीचमा, 85 प्रतिशत ransomware मा जोडिएको छ।.
संक्रमित कम्प्युटरको मालिकले सुरक्षा जोखिमका विभिन्न पक्षहरूको सामना गर्दछ। अपराधीहरूले तपाईंको इमेल र सोशल मिडिया खाताहरूमा सबै जानकारी फसल गर्न सक्छन्। केहि यो जानकारी बेच्दै गर्दा अरूले यसलाई दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दछ जस्तै शिकारको बैंक खाताहरू चोर्ने।
बोटनेट पैसा बनाउन योजना परिवर्तन भएको छ (1 9)
पहिले, botnet अपरेटरहरु लाई प्रायः पैसा बनाउन को लागि स्पैम वितरण मा निर्भर गरियो। मरीना जस्ता ठूला बोटनीहरू प्रतिदिन90909090 स्प्याम पठाउन सक्थे। तर अधिकारीहरू र सुरक्षा अपरेटरहरू चाँडै ठूला बोटनेटहरूसँग उठ्छन् र अन्ततः तिनीहरूका अधिकांशलाई ध्वस्त पार्छन्।
cybercrime संसारमा अभिनवले अधिक संवेदनात्मक बटनेट मोडेल ल्याएको छ। उनीहरूले अहिले P2P (सह-सह-साथी), मोडेल प्रयोग गर्दै छन्। P2P मोडेलको वास्तुकला अनुसार, बटहरूले सर्भर र ग्राहकको रूपमा दुवै प्रदर्शन गर्दछ। उनीहरूले आदेशहरू पठाउन र प्राप्त गर्न सक्छन्, र यसले असफलताबाट जोगिन मद्दत गर्दछ।
अन्य प्रकारका बटहरू, कम्प्यूटरका अलावा, पनि बढि प्रयोग गरिन्छ। यी चीजहरू र यन्त्रहरू चीजहरू (आईओटी) श्रेणीमा इन्टरनेटमा छन्।
अपराधीहरूले वेब सर्भरको अपेक्षाकृत अधिक शक्ति र छिटो इन्टरनेटको फाइदा उठाउँदैछन् ट्राफिक रिडिरेक्ट गर्न र स्प्याम वितरण गर्न। आईओटीमा उपकरणहरू सामान्यतया अपर्याप्त रूपमा सुरक्षित छन्, र यसले तिनीहरूलाई बोटनेटहरूको लागि सजिलो शिकार बनाउँछ। कार्यहरूको दायरा यी 'चीजहरू' प्रयोग गरेर DDOS आक्रमणहरू सहित प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईओटीको भयानक वृद्धिको दृश्यमा, आईओटी यन्त्रहरूमा बोस् गतिविधिको वृद्धि कत्ति खतरनाक छ। यो अनुमान गरिएको छ कि 2020 सम्म आईओटी श्रेणीमा यन्त्रहरूको संख्या 20 Source .8 मिलियन पुग्छ।
सम्भव छ कि अधिक कम्प्युटरहरू, सर्भरहरू र 'चीजहरू' बोटनेटहरूबाट गढित हुनेछन् भने उपभोक्ताहरू र संस्थाहरू उपयुक्त सुरक्षा उपकरणहरू र तंत्रहरू मा अद्यावधिक हुने छैनन्। बोटनेटहरूको गिरोहबाट बच्नको लागि सुरक्षा प्रशिक्षण कुञ्जी हो। जब मानिसहरू खतराबाट चिनिन्छन्, अन्तबिन्दु र सञ्जाल सुरक्षा उपकरण र समाधानको कार्यान्वयनले थप सफलता पाउँछ। इन्टरनेट सुरक्षा समाधान विक्रेताहरू अहिले botnet सुरक्षा प्रस्ताव गर्दै छन् जुन बोट अपरेटरहरूको संदिग्ध संचार पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।